Midowga Yurub oo ku dhawaaqay Taageeradii ugu horeysa ee Miisaaniyadeed ee Dowlada Federaalka Soomaaliya – Madal Furan
Hoy > Warka > Midowga Yurub oo ku dhawaaqay Taageeradii ugu horeysa ee Miisaaniyadeed ee Dowlada Federaalka Soomaaliya
Muqdisho(Madal Furan) – Midowga Yurub ayaa ansixiyay howlgalkiisii ​​ugu horeeyay ee taageerada miisaaniyadeed ee ku siinayo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Yaboohan ayaa wadar ahaan Marka la isku daro gaaraya 100 milyan oo euros oo laga dhigi doono sedexda bilood ee ugu dambaysa ee sanadka 2018 ilaa 2021, taageeradan miisaaniyadeed ayaa la marin doonaa Dowladda Federaalka iyadoo la adeegsanayo nidaamka dowliga ah.
Jawaabtan wadajirka ah ee beesha caalamka ayaa u ah fursadaha cusub ee dhismaha dowlad-goboleedyada iyo qaranka ee Soomaaliya. Waxay gacan wayn ka geysan doontaa kor u qaadida heerarka sareeya ee maamulka iyo la xisaabtanka Dowladda Federaalka iyo Dawladaha xubnaha ka ah Federaalka. Waxay sidoo kale gacan wayn ka geysan doontaa sii xoojinta kalsoonida caalamiga ah ee Dowladda Federaalka iyadoo loo eegayo dhisida dib u habeynta xoogan ee loogu talagalay Hay’adaha Maaliyadeed ee Caalamiga ah ee ka yaraynta deemaha lacagaha ee wadamada aan dhaqaalaha haysan ee saboolka ah.
Midowga Yurub, oo ah deeq bixiyaha ugu weyn Soomaaliya, waxaa ka go’aan ah inuu taageero waddanka si uu u gaaro himilooyinka horumarineed ee ku saleysan Qorshaha Horumarinta Qaranka. Tani waxay la socotaa qaabaynta dhaqaalaha iyo ka dhaafida deynta waxay dalka u horseedi kartaa marxalad cusub oo barwaaqo ah.
DAAWO:- Xildhibaan Somaliland ah oo kashifay xafiiska socdaalka DFS oo Hargeysa gudaheeda ka furan
Guddi Madaxweyanah Puntland u saaray dilkii Suldaan Xasan Cali Jibriil ee shalay ka dhacay magaalada Badhan